Akoneshare.com – ဖေ့စဘွတ်ပေါ်ရှိသတင်းထူးများကို တစ်နေရာထဲတွင် ဖတ်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
တရုတျ-မွနျမာ သဘောတူညီခကျြမြား တှငျ ထူးထူးခွားခွား ပါဝငျခွငျးမရှိ
တပျမတျော မှ ဂကျြတိုကျလယောဉျမြားက မွနျမာ လကွေောငျး ပိုကျနကျ အတှငျး အသှားရော အပွနျပါ ကွိုဆို ပို့‌ဆောငျနှုတျ ဆကျခွငျးမြား၊ နပွေညျတျော ရှိ လမျးတလြောကျ ပနျးမြားနဲ့ ဝဝေဆောဆာ ကွိုဆိုခဲ့ခွငျးမြား၊ ရနျကုနျ မွို့တျော ခမျးမရှေ့ က ဆန်ဒပွပှဲ၊ ဖဈေဘုတျကနေ ရှီကငျြဖငျြ့ ရဲ့အမညျကို မွနျမာ မှ အင်ျဂလိပျဘာသာ ပွနျဆိုတဲ့ အယျဂိုရီသမျမှ Mr.Shithole လို့ မှားယှငျး ပွနျဆိုမိတဲ့ အတှကျ ဖစျေ့ဘုတျကနေ တရားဝငျ တောငျးပနျခဲ့ရခွငျးမြားနဲ့ အတူ
တရုတျ သမ်မတ ရှီကငျြဖငျြ့ ရဲ့ ‘သမိုငျးဝငျ’ ခရီးစဉျသညျ စနနေေ့ နလေ့ညျ ၂:၄၅ တှငျအဆုံးသတျ သှားခဲ့ပွီ ဖွဈပါတယျ။
တရုတျ နှငျ့ မွနျမာ အကွား သဘောတူညီခကျြပေါငျး ၃၃ ခု လကျမှတျရေးထိုးခဲ့သျောလညျး အမြား မြျောလငျ့ထားသညျ့ တရုတျ-မွနျမာ စီးပှားရေး စင်ျကွနျလမျးမကွီး
နှငျ့ သကျဆိုငျသညျမြားက ဖွဈနိုငျခွေ လလေ့ာမှု သဘောတူညီခကျြမြား လောကျနဲ့ အဆုံးသတျ သှားခဲ့ပါတယျ။
မွနျမာ အနနေဲ့ တရုတျ ရငျးနှီးမွုပျနှံမှုမြားကိုအထူးသတိကွီးစှာ နဲ့ ကိုငျတှယျနတော ထငျရှားကွောငျး ရိုကျတာ သတငျးဌာန က ဆိုပါတယျ။
အဓိက လကျမှတျရေးထိုးခဲ့တာကတော့ ကြောကျဖွူ ဆိပျကမျးနဲ့ ရနျကုနျ မွို့သဈစီမံကိနျးမြားသာ ရှိတာ တှရေ့ပါတယျ။ မွဈဆုံ နဲ့ ပတျသကျပွီး မညျသို့မြှ ရညျညှနျး
ဖျေါပွခဲ့ခွငျး မရှိတာ တှရေ့ပါတယျ။
ရနျကုနျ ရှိ လလေ့ာသူ ရဈခတျြ ဟိုဆေးကတော့ no big bang လို့ ခပျရှငျးရှငျးပဲ မှတျခကျြ ပေးခဲ့ပါတယျ။
တရုတျဖကျက တော့ တဆငျ့ပွီး တဆငျ့ တိုးတကျအောငျ လုပျယူသှားမယျလို့ ရညျမှနျးထားပုံ ရှိတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
အိန်ဒိယ အဖို့ကတော့ ဒျေါလာ ၁.၃ ဘီလီယံတနျ‌ကွေးရှိ ကြောကျဖွူ ဆိပျကမျး စီမံခကျြအတှကျ စိုးရိမျမကငျး ဖွဈနကွေောငျး အိန်ဒိယ
သတငျးစာတှေ မှာ ဖျေါပွထားပါတယျ။ အိန်ဒိယ အဖို့က သူနိုငျငံ ပတျခြာလညျတှငျ သီရိလင်ျကာ ရှိ ဟမျဘမျတိုတာ ဆိပျကမျး၊ ပါကစ်စတနျ ရှိ ဂှာဒါ ဆိပျကမျးမြားနဲ့ တရုတျက ဝိုငျးရံထားပွီး ဖွဈနလေို့ပါပဲ။
တရုတျ သမ်မတကတော့ ညီရငျးအကို မောငျရငျးနှမ စိတျနဲ့ အခကျအခဲ ဟူသမြ အတူတကှ ရငျဆိုငျပွီး ဖေးမသှားမှု နဲ့ နှဈနိုငျငံဆကျဆံရေးကို အကောငျအထညျ ဖျေါနိုငျ
မယျ လမျးပွမွပေုံကို အနာဂတျအတှကျ ရေးဆှဲသှားမယျလို့ ရှနျးရှနျးဝအေောငျ ပွောသှားခဲ့ပါတယျ။
ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျကတော့ တရုတျနိုငျငံသညျ နိုငျငံတကာ အရေးအရာ မြားနှငျ့ ကမ်ဘာ စီးပှားရေး တှငျ အရေးပါသော ကဏ်ဍ မှ ပါဝငျ
နတောကွောငျ့ ပတျဝနျးကငျြ ပကျြစီးစမေယျ့အရေး ရှောငျရှားပွီး ဒသေခံတှေ အကြိုးရှိမယျ့ စီမံကိနျးမြားကို ဆောငျရှကျဖို့ တိုကျတှနျးလိုကျပါတယျ။
ဒါဟာ မွနျမာတနိုငျငံတညျးကို ရညျရှယျပွောဆိုတာမြိုး မဟုတျပဲ ကမ်ဘာတဝှမျးရှိ တရုတျစီမံကိနျးမြားနဲ့ ပတျသကျပွီး ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ထောကျပွသှားတာ လညျး ဖွဈပါတယျ။
ဒါကို ကွညျ့ရငျ ငါတို့ နိုငျငံငယျလေးပဲ ဆိုပွီးသိမျငယျစိတျ မြိုး သူမမှာ လုံးဝမရှိပဲ world class statesman တယောကျမှာ ရှိသငျ့ရှိထိုကျတဲ့ အတှေးအချေါ အယူအဆ
ကနေ ထှကျပျေါလာတာမြိုး ပဲ ဖွဈပါတယျ။
နိုငျငံရေး ပါတီ ခေါငျးဆောငျမြားကိုပါ တှဆေုံ့ခဲ့တယျ ဆိုပမေယျ့ လကျဆှဲနှုတျဆကျယုံသကျသကျပဲလို့ SNLD မှ ဦးစိုငျးကြျောညှနျက ညညျးတှား သှားခဲ့ပါတယျ။
ရှီကငျြဖငျ့ရဲ့ ခရီးစဉျ မစတငျမီ တရုတျနိုငျငံထုတျ ဂလိုဘယျ တိုငျးမျ သတငျးစာကတော့ မွနျမာသညျ အနောကျနိုငျငံမြားနှငျ့ သှားရောကျ ရောနှောခဲ့မိရာမှ နှံအိုငျထဲ ကသြှား၍ တရုတျနိုငျငံက ဆှဲတငျထားရခွငျး ဖွဈတယျလို့ ပွောငျပွောငျတငျးတငျးပဲ ရေးသားလာပါတယျ
အနောကျနိုငျငံတှကေို သှားရောကျခညျြးကပျရာမှ သူတို့တတှရေဲ့ လိုရငျတမြိုး မလိုရငျတမြိုး ဆကျဆံပုံတှကေို မွနျမာမှ သိရှိသဘောပေါကျလာပွီး သံတမနျ ရေး နဲ့ စီးပှားရေး အကူအညီ အတှကျ တရုတျပွညျဖကျကိုပွနျလှညျ့လာတာ ဖွဈတယျလို့လညျး ရေးသားခဲ့ပွနျပါတယျ။
တရားဝငျ ကွငွောခကျြ ထုတျပွနျရာမှာတော့’နိုငျငံတကာ မကျြနှာစာတှငျ မွနျမာမှ မှ မိမိ၏ရသငျ့ရထိုကျသော အခှငျ့အရေး၊ အကြိုးစီးပှား နှငျ့ နိုငျငံ ဂုဏျသိက်ခာကို ကာ
ကှယျ‌နိုငျရေး ကွိုးပမျးနမှေုမြားကို အခိုငျအမာ ထောကျခံကွောငျး’ ဖျေါပွထားပါတယျ။
Posted bytrooperktr January 19, 2020 Posted inUncategorizedLeaveacomment on တရုတျ-မွနျမာ သဘောတူညီခကျြ ထူးထူးခွားခွားမပါဝငျ
Posted bytrooperktr January 17, 2020 January 17, 2020 Posted inUncategorizedLeaveacomment on ညောငျလေးပငျမွို့တှငျ ရဲအငျအား ၁၀၀ကြျောဖွငျ့ လောငျးကစား‌ ပွုလုပျသညျဟု ဆိုသညျ့ နရော၂၀ ကို တဈပွိုငျတညျးဝငျ‌ ရောကျဖမျးစီး ရာ ၂ ဦးဖမျးစီးရမိ
ICJ မှာ အမစေု သှားရငျဆိုငျတုံးက ထူးခွား
ခကျြတှေ အမြားကွီး ရှိခဲ့ပါတယျ
ဒီဆှေးနှေးခကျြနဲ့ ပါတျသကျတာ လေး ခုဘဲ
*ပထမတခကျြ*က ၁၃. ၁၂ . ၂၀၁၉ ရကျ
နယျသာလနျမှာ အမစေု့ ကို သှားရောကျဝနျးရံ
ကွတဲ့ မွနျမာတှနေဲ့ တှဆေုံ့ပှဲမှာ
အမေ ပွောသှားတဲ့ စကားပါ
” လိုအပျတဲ့ အခြိနျမှာ အခုလို ဝနျးရံ ပေးကွတဲ့
အတှကျ ကြေးဇူးတငျတယျ ” ဆိုတဲ့အပွငျ
ကြေးဇူး ဆိုတဲ့ အဓိပ်ပါယျကိုပါ ပွောသှားခဲ့ပါတယျ
ကြေးဇူး ဆိုတဲ့စကားဟာ အမစေု ပွောခဲလှနျးတဲ့
စကားပါ ရငျထဲက နှဈနှဈကာကာ ပွောတာဆိုလို့
ဒီတကွိမျဘဲ ရှိမယျ လို့ ထငျပါတယျ
အမစေု ဟာ အမှနျတရား သစ်စာသမားတယောကျ
စိတျဓာတျခိုငျမာတဲ့သူ ယုံကွညျမှုလညျး အပွညျ့
” လိုအပျတဲ့ အခြိနျ ” လို့ သုံးသှားတာ စိတျပိုငျးဆိုငျ
ရာ အငျအား နညျးသှားတယျလို့ ယူဆမိပါတယျ
နှဈယောကျမရှိအောငျ စိတျဓာတျ ခိုငျမာသူ
ရငျဆိုငျရတဲ့ အမှုက သိပျခကျလှနျးသလား လို့
ဘာကမြား သိပျကွောကျစရာ ကောငျးနလေဲ
သာမာနျအခွအေနေ တခုကို ပွဈမှတျထား
ပွီး ရေးကွီးခှငျကယျြ လုပျလာတဲ့
အငျအားကွီး နိုငျငံတှရေဲ့ ကမ်ဘာ့စားခှကျလုနတေဲ့
ပွဿ နာကွီး ရှိနတေယျ ဆိုတာ သိနခေဲ့လို့ပါဘဲ
*ဒုတိယ အခကျြ* အနနေဲ့ ၁၂ . ၁၂ . ၂၀၁၉ ရကျ
ဂမျဘီဟာနိုငျငံနဲ့ အတငျအခွေ လုပျတဲ့နကေ့
စှတျစှဲထားတဲ့ အခကျြအလကျတှနေဲ့ ဦးသနျ့
အကွောငျးက မသကျဆိုငျဘဲ ပါဝါ ထုတျသုံး
ယုံ သကျသကျ လုပျခဲ့သလား ?
ကလေးဆနျလှနျးနတေဲ့ အကှကျကို အမစေု
လို ပုဂ်ဂိုလျက သိက်ခာကခြံပွီး သုံးမှာ မဟုတျဘူး
သုံးခဲ့ရငျလညျး စှတျစှဲခကျြတှကေို ဘယျလိုမှ
ဦးသနျ့ အကွောငျး အခွခေံလောကျ
ကုလသမ်မဂအတှငျးရေး တာဝနျကို မွနျမာပွညျက
ပနျးတနျောသား ဦးသနျ့ ထမျးဆောငျနတေဲ့အခြိနျ
၁၉၇၄ ခုနှဈလောကျမှာ ကြူးဘားအရေးအခငျး
( ခုနှဈသခွောမမှတျမိတဲ့အတှကျ နားလညျခှငျ့
အမရေိကနျ နဲ့ ဆိုဗီယကျယူနီယံ(ရုရှ) တို့ စဈ
ရေးအရတငျးမာလာကွပွီး ဒုံးတှနေဲ့ ပွဈခတျ
တိုကျခိုကျမဲ့ အခွအေနမှော ဦးသနျ့ ဝငျရောကျ
တိုကျခိုကျဖွဈရငျ အမရေိကနျ အပါအဝငျ
မိတျဖကျနိုငျငံတှနေဲ့ ရုရှ အပါအဝငျ မိတျဖကျ
နိုငျငံတှပေါ စဈပှဲမှာ ပါလာပွီး တတိယကမ်ဘာ
ဒီအတှကျ တကမ်ဘာလုံး စိုးရိမျပူပနျခဲ့ရတဲ့ အပူ
မီးကို ဦးသနျ့ က ငွိမျးသတျပေးနိုငျခဲ့လို့
Peace ဆိုတဲ့ စကားရပျနဲ့ ☮️ အမှတျအသား
ဟာ ဦးသနျ့ ကို ဂုဏျပွုခဲ့တဲ့ ကမ်ဘာ့မှတျတမျး
ဝငျ သကျသေ တခုပါ
ဖငျမှာ သုံးခု ခှဲထှကျထားတာက ဒုံး ပုံသဏ်ဍနျ
ဖွဈပွီး အဝိုငျးက တားဆီးကာကှယျခွငျး
ထိမျးခြုပျလိုကျခွငျး ဆိုတဲ့ သဘောပါ
ဦးသနျ့အကွောငျး အမစေု ထညျ့ပွောသှားတဲ့
ဒါကို သဘောမပေါကျဘဲ ဆုံးဖွတျခကျြ
ပျေါပေါကျလာနိုငျစရာ ရှိတယျ လို့ သတိပေး
ဒါကွောငျ့လညျး လြှောကျလဲခကျြနဲ့ မတူတဲ့
အမှု ကို ပိတျသိမျးလိုကျပါ ဆိုတဲ့အမိနျ့ဆနျဆနျ
စကားကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ပွောခဲ့တာဘဲ ဖွဈပါတယျ
အမစေု ပေးလိုကျတဲ့ massage ကို
စောငျ့ကွညျ့နတေဲ့ သိနျးငှကျကွီးအမရေိကနျ နဲ့
လကျမညျးကွီး တရုပျက ကောငျးကောငျး
အလုပျသဘောအရ ICJ က ကွားနာမှုအပျေါ
တရားစှဲဆိုသငျ့/မသငျ့ ဆုံးဖွတျရမှာ ဖွဈပမေဲ့
တကယျ အလုပျ လုပျရမှာက အမရေိကနျ နဲ့
တရုပျ ဘဲလို့ ပညာသားပါပါ ပွောသှားတာပါ
ဒါကွောငျ့လညျး ICJ ရဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြက
အမရေိကနျ နဲ့ တရုပျရဲ့ အနိုငျအရှုံးသာဖွဈတဲ့
အတှကျ အဖွေ ဘယျလိုထှကျထှကျ
” ပွညျသူနဲ့ အတူတူ ရငျဆိုငျကွမယျ ” ဆိုပွီး
အမစေု ပွောလာတာဟာ * တတိယမွောကျ*
ဇနျ ၃ ရကျမှာ အမရေိကနျက အီရနျစဈဦးစီးခြုပျ
ကို ကှကျမကျြလိုကျတာ တကမ်ဘာလုံး ထိတျလနျ့
ပွီး တတိယ ကမ်ဘာစဈ ဖွဈပွီလားဆိုတဲ့ အသိနဲ့
ဇနျ ၄ ရကျနမှေ့ာ မွနျမာ့လှတျလပျရေးနကေို့
အကွောငျးပွပွီး မွနျမာနဲ့အတူ လကျတှဲမယျဆိုတဲ့
ကွညောခကျြကို အမရေိကနျက ထုတျပွနျ
ဒီ ထုတျပွနျခကျြဟာ တကယျလိုအပျနတေဲ့
ICJ ကွားနာမှု ရငျဆိုငျနခြေိနျမှာ မကွညောဘဲ
အီရနျ စဈဗိုလျခြုပျကို ကှကျမကျြပွီး နောကျ
တရကျဖွဈတဲ့ လှတျလပျရေးနမှေ့ာမှ ကွညော
လိုကျတာဟာ တိုကျဆိုငျမှု မဟုတျပါဘူး
အငျအားကွီး နှဈနိုငျငံ အားပွိုငျမှုအတှကျ
အခကျြအလကျတှေ အမြားကွီး ရှိပမေဲ့
မွနျမာဟာ အရေးကွီး အခကျြတခု ဖွဈနတေယျ
အီရနျ စဈဦးစီးမှူးကို ကှကျမကျြပွီး
မွနျမာကို လကျတှဲမယျဆိုတဲ့ အမရေိကနျရဲ့
လုပျရပျက ပွိုငျဖကျ တရုပျကွီးရဲ့
အဓိက အားနညျးခကျြတှကေို နငျးခပြွေပွီး
တရုပျကွီးရဲ့ တုနျ့ပွနျခကျြကတော့ ထိမျးထိမျး
သိမျးသိမျး လုပျကွဖို့ ဆိုတဲ့စကားပါဘဲ
ဒီစကားရဲ့ အကြိုးကတော့ ကွိုးတနျးပျေါ
လမျးလြောကျပွတဲ့ ကနျသမ်မတ ထနျြ့ဈ ကို
ပလ်လငျပျေါ တငျပေးလိုကျသလို အမရေိကနျ
အီရနျအနနေဲ့ လကျတုနျ့ပွနျမယျ လို့
ပွောပမေဲ့ ဒီဇငျဘာ ၂၀၁၉ မှာ ပူးတှဲစဈရေး
လကေ့ငျြ့မှုတှေ လုပျခဲ့ကွတဲ့ ရုရှကလညျး
လသေံပြော့နဲ့ ဖွဈတာကွောငျ့ စဈကွီးဖွဈလာ
ဒါနဲ့တငျ ပှဲပွီးပွီလား ဆိုရငျ မပွီသေးပါ
အထိနာသှားတဲ့ တရုပျက အားကိုးအားထား
ပွုရမဲ့ အရေးကွီးဆုံး အခကျြတှကေို အမွနျဆုံး
ယခုလအတှငျး မွနျမာကို လာဖို့စီစဉျတယျ
ဆိုတာ မွနျမာဟာ အရေးကွီးဆုံးအခကျြတှေ
ထဲက ထိပျဆုံးမှာ ရှိနတေယျဆိုတာ
ကမ်ဘာ့အရေးမှာ မွနျမာကို ထညျ့သှငျး
ကစားခဲ့တဲ့ နောကျကှယျက လကျမညျးကွီး
ဆိုတာလညျး ဘူးပျေါသလို ထငျရှားသှားပါပွီ
ရခိုငျအရေးဟာ တရုပျအတှကျ အကွီးမားဆုံး
မြျောလငျ့ခကျြ ဖွဈတာကို သိနခေဲ့တဲ့အတှကျ
အမစေု က ” နိုငျငံတျောရဲ့ အကြိုးစီးပှားအတှကျ
ICJ ကို ကိုယျတိုငျသှားရောကျရငျဆိုငျမညျ ”
ဆိုတဲ့ ခေါငျးစဉျကို သုံးခဲ့တာပါ
ဒါက ထူးခွားတဲ့ * စတုတ်ထမွောကျအခကျြ * ပါ
အမစေု ICJ မှာ ရငျဆိုငျပွီး ပွနျလာတဲ့နေ့
ဒီ ၁၄ ၂၀၁၉ ညနေ ၄း၅၅ ခြိနျမှာ တငျခဲ့တဲ့
ကနြျော့ရဲ့ post မှာ
ICJ ရဲ့ အဆုံးအဖွတျ မထှကျသေးပမေဲ့
အမေ နိုငျပွီလို့ ရေးတငျခဲ့ပါတယျ
ဘာကွောငျ့ နိုငျပွီ ပွောရသလညျး ဆိုတာ
ကွုံရငျ ရေးတငျပါ့မယျဆိုတဲ့ ကတိအတိုငျး
အခု post နဲ့ သကျသပွေလိုကျပါတယျ
ရှိပမေဲ့ ကနြျော့ရဲ့ တငျပွခကျြမှာ မွနျမာနိုငျငံနဲ့ ပတျ
တရုပျ အထိနာ သှားတာနဲ့အတူ
မွနျမာပွညျတှငျးရေး မှာ လိုသလို ကစားနတေဲ့
ဒါ့ကွောငျ့ မပွီးပွတျသေးတဲ့ ခွဥေ ပွငျဆငျရေး
နဲ့ ငွိမျးခမျြးရေး လုပျငနျးစဉျတှေ အတှကျ
s ĵ t
ဇနျ ၅ ၂၀၂၀ပွညျ့
Posted bytrooperktr January 13, 2020 January 13, 2020 Posted inUncategorizedLeaveacomment on ကမ်ဘာနိုငျငံရေးကစားကှကျထဲက မွနျမာ
တောင်ကြီးမြို့ (၄)လောင်းပြိုင်လူသတ်မှုအား မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှ (၂)ရက်အတွင်း
နေပြည်တော်၊ မေ ၁
ရှမ်းပြည်နယ်၊ တောင်ကြီးမြို့၊ ကန်သာယာရပ်ကွက်၊ မင်္ဂလာလမ်း၊ အမှတ်(၁၁၈)နေ ဒေါ်အေးရွှေ ၇၀နှစ်၊ ရှမ်း/ဗုဒ္ဓ (မြင်းဖြူနှစ်ကောင်တိုင်းရင်းဆေးတိုက်ပိုင်ရှင်)၊ (ဖ)ဦးအန်ပန်သည် ပင်လုံမြို့၊ ကမ္မဌာန်းကျောင်းတိုက် ဆွမ်းကပ်လှူပွဲသို့ သွားရောက်ပြီး ၂၈-၄-၂၀၁၉ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်း နေအိမ်သို့ ပြန်ရောက်စဉ် နေအိမ်အဝင်ပေါက် ကားဂိုဒေါင်အောက်တွင် သားမက်ဖြစ်သူ စိုင်းဆေမွန်(ခ)ဆေမွန်အား လည်းကောင်း၊ နေအိမ်အပေါ်ထပ် ယာဘက်အခန်းအတွင်း သမီးဖြစ်သူ မနန်းခမ်းလှိုင်နှင့် မြေးဖြစ်သူ စိုင်းဖဖ တို့အား လည်းကောင်း၊ ဝဲဘက်အခန်းအတွင်း၌ အိမ်ဖော် ဖြစ်သူ မအေးမိုးအား လည်းကောင်း၊ ပြင်ပဒဏ်ရာအသီးသီးဖြင့် သေဆုံးနေသည်ကို တွေ့ရှိရပြီး နေအိမ်ရှိ ရွှေထည်ပစ္စည်းမျိုးစုံ (၁၅)မျိုး၊ ငွေကျပ်သိန်း (၄၀)အပါအဝင် စုစုပေါင်းတန်ဖိုး ကျပ်(၁၅၅၇) သိန်းခန့် ပျောက်ဆုံးနေသဖြင့် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများအား စုံစမ်းဖော်ထုတ်အရေးယူပေးရန် တိုင်ကြား ခဲ့၍ တောင်ကြီးမြို့မရဲစခန်း (ပ)၇၉၃/၂၀၁၉၊ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၀၂/၃၉၄ ဖြင့် အမှုရေးဖွင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အနေဖြင့် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများအား ဖော်ထုတ်နိုင်ရေး စိစစ်စုံစမ်း စစ်ဆေးခဲ့ရာ တာဝန်သိ ပြည်သူတစ်ဦး၏ သတင်းပေးပို့ချက်အရ မသင်္ကာသူကို သတင်းကွင်းဆက် ရရှိပြီး အခင်းဖြစ်အရပ်၌ကျန်ရှိသည့် သဲလွန်စပစ္စည်းများနှင့်ဆက်စပ်အတည်ပြုဖော်ထုတ်ချက်အရ ၂၉-၄-၂၀၁၉ ရက်နေ့ နံနက် (၇)နာရီအချိန်တွင် တရားခံ တင်အုန်း(ခ)အိုက်အုံးအား ကျောက်မဲ မြို့နယ်၊ အထက်မြင်းကွင်းကျေးရွာရှိ ၎င်း၏ နေအိမ်၌ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း၊ အစစ်ခံဖော်ထုတ် ချက်အရ အမှုမှ သက်သေခံ ရွှေထည်ပစ္စည်းမျိုးစုံ (၁)ပိဿာနီးပါးခန့်နှင့် ငွေ(၇)သိန်း(၂)သောင်းကျပ် တို့ကို ၎င်း၏ နေအိမ်မှ ၁-၅-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် အထူးအမှုစစ်အဖွဲ့မှ ရှာဖွေဖော်ထုတ်သိမ်းဆည်း နိုင်ခဲ့ပါသည်။
ကနဦးစစ်ကြောချက်အရ တရားခံ တင်အုန်း(ခ)အိုက်အုံးသည် မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲနေသူ တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး မြင်းဖြူနှစ်ကောင်တိုင်းရင်းဆေးတိုက်ပိုင်ရှင် ဒေါ်အေးရွှေနှင့် မောင်နှမဝမ်းကွဲတော်စပ်ကြောင်း၊ ဒေါ်အေးရွှေ၏ ခင်ပွန်းမှာလည်း ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏ဇနီးမောင်နှံမှာ သားသမီးထွန်းကားမှု မရှိဘဲ တင်အုန်း(ခ)အိုက်အုံး၏ ပထမအိမ်ထောင်နှင့်ရရှိထားသူ စိုင်းဝင်းမောင်အား မွေးစားထားခဲ့ ကြောင်း၊ လက်ရှိအချိန်တွင် စိုင်းဝင်းမောင်သည် အိမ်ထောင်ကျကာ အိမ်ခွဲ၍သီးခြားနေထိုင်ကြောင်း၊ ထို့ပြင် ဒေါ်အေးရွှေက ယခုသေဆုံးသူ မနန်းခမ်းလှိုင်ကိုလည်း လွန်ခဲ့သော နှစ်(၂၀)ကျော်ခန့်က သမီးအဖြစ် ထပ်မံမွေးစားခဲ့ကြောင်း၊ မနန်းခမ်းလှိုင်မှာ ဒေါ်အေးရွှေနှင့်အတူနေထိုင်ပြီး ဆေးတိုက် လုပ်ငန်းကိုလည်းကိုယ်တိုင်ဦးစီးလုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်သဖြင့် မွေးစားမိခင်နှင့်အတူ အနေနီးစပ်ကြောင်း သို့ဖြစ်၍ အမွေခွဲမှုများရှိလာပါက တရားခံ၏ သား အမွေအရနည်းမည်ကို စိုးရိမ်မှု၊ မိမိ၏ ငွေကြေး လိုအပ်မှုများကို အခြေခံကာ အခြားသူနှင့်အတူ ပူးပေါင်း၍ ၎င်းမှ အဓိကစီမံဦးဆောင်ကြိုးကိုင်ပြီး သေဆုံးသူ မိသားစုအား သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အနေဖြင့် ကျန်တရားခံအား ဆက်လက်ဖမ်းဆီးရမိရေး၊ ကျန်ရှိသက်သေခံ ပစ္စည်းများထပ်မံသိမ်းဆည်းရရှိရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
တောငျကွီးမွို့ (၄)လောငျးပွိုငျလူသတျမှုအား မွနျမာနိုငျငံရဲတပျဖှဲ့မှ (၂)ရကျအတှငျး
နပွေညျတျော၊ မေ ၁
ရှမျးပွညျနယျ၊ တောငျကွီးမွို့၊ ကနျသာယာရပျကှကျ၊ မင်ျဂလာလမျး၊ အမှတျ(၁၁၈)နေ ဒျေါအေးရှေ ၇၀နှဈ၊ ရှမျး/ဗုဒ်ဓ (မွငျးဖွူနှဈကောငျတိုငျးရငျးဆေးတိုကျပိုငျရှငျ)၊ (ဖ)ဦးအနျပနျသညျ ပငျလုံမွို့၊ ကမ်မဌာနျးကြောငျးတိုကျ ဆှမျးကပျလှူပှဲသို့ သှားရောကျပွီး ၂၈-၄-၂၀၁၉ ရကျနေ့ နံနကျပိုငျး နအေိမျသို့ ပွနျရောကျစဉျ နအေိမျအဝငျပေါကျ ကားဂိုဒေါငျအောကျတှငျ သားမကျဖွဈသူ စိုငျးဆမှေနျ(ခ)ဆမှေနျအား လညျးကောငျး၊ နအေိမျအပျေါထပျ ယာဘကျအခနျးအတှငျး သမီးဖွဈသူ မနနျးခမျးလှိုငျနှငျ့ မွေးဖွဈသူ စိုငျးဖဖ တို့အား လညျးကောငျး၊ ဝဲဘကျအခနျးအတှငျး၌ အိမျဖျော ဖွဈသူ မအေးမိုးအား လညျးကောငျး၊ ပွငျပဒဏျရာအသီးသီးဖွငျ့ သဆေုံးနသေညျကို တှရှေိ့ရပွီး နအေိမျရှိ ရှထေညျပစ်စညျးမြိုးစုံ (၁၅)မြိုး၊ ငှကေပျြသိနျး (၄၀)အပါအဝငျ စုစုပေါငျးတနျဖိုး ကပျြ(၁၅၅၇) သိနျးခနျ့ ပြောကျဆုံးနသေဖွငျ့ ပွဈမှုကြူးလှနျသူမြားအား စုံစမျးဖျောထုတျအရေးယူပေးရနျ တိုငျကွား ခဲ့၍ တောငျကွီးမွို့မရဲစခနျး (ပ)၇၉၃/၂၀၁၉၊ ရာဇသတျကွီးပုဒျမ ၃၀၂/၃၉၄ ဖွငျ့ အမှုရေးဖှငျ့ ဆောငျရှကျခဲ့ပါသညျ။
မွနျမာနိုငျငံရဲတပျဖှဲ့အနဖွေငျ့ ပွဈမှုကြူးလှနျသူမြားအား ဖျောထုတျနိုငျရေး စိစဈစုံစမျး စဈဆေးခဲ့ရာ တာဝနျသိ ပွညျသူတဈဦး၏ သတငျးပေးပို့ခကျြအရ မသင်ျကာသူကို သတငျးကှငျးဆကျ ရရှိပွီး အခငျးဖွဈအရပျ၌ကနျြရှိသညျ့ သဲလှနျစပစ်စညျးမြားနှငျ့ဆကျစပျအတညျပွုဖျောထုတျခကျြအရ ၂၉-၄-၂၀၁၉ ရကျနေ့ နံနကျ (၇)နာရီအခြိနျတှငျ တရားခံ တငျအုနျး(ခ)အိုကျအုံးအား ကြောကျမဲ မွို့နယျ၊ အထကျမွငျးကှငျးကြေးရှာရှိ ၎င်းငျး၏ နအေိမျ၌ ဖမျးဆီးရမိခဲ့ကွောငျး၊ အစဈခံဖျောထုတျ ခကျြအရ အမှုမှ သကျသခေံ ရှထေညျပစ်စညျးမြိုးစုံ (၁)ပိဿာနီးပါးခနျ့နှငျ့ ငှေ(၇)သိနျး(၂)သောငျးကပျြ တို့ကို ၎င်းငျး၏ နအေိမျမှ ၁-၅-၂၀၁၉ ရကျနတှေ့ငျ အထူးအမှုစဈအဖှဲ့မှ ရှာဖှဖေျောထုတျသိမျးဆညျး နိုငျခဲ့ပါသညျ။
ကနဦးစဈကွောခကျြအရ တရားခံ တငျအုနျး(ခ)အိုကျအုံးသညျ မူးယဈဆေးဝါးစှဲနသေူ တဈဦး ဖွဈပွီး မွငျးဖွူနှဈကောငျတိုငျးရငျးဆေးတိုကျပိုငျရှငျ ဒျေါအေးရှနှေငျ့ မောငျနှမဝမျးကှဲတျောစပျကွောငျး၊ ဒျေါအေးရှေ၏ ခငျပှနျးမှာလညျး ကှယျလှနျသှားပွီဖွဈပွီး ၎င်းငျးတို့၏ဇနီးမောငျနှံမှာ သားသမီးထှနျးကားမှု မရှိဘဲ တငျအုနျး(ခ)အိုကျအုံး၏ ပထမအိမျထောငျနှငျ့ရရှိထားသူ စိုငျးဝငျးမောငျအား မှေးစားထားခဲ့ ကွောငျး၊ လကျရှိအခြိနျတှငျ စိုငျးဝငျးမောငျသညျ အိမျထောငျကကြာ အိမျခှဲ၍သီးခွားနထေိုငျကွောငျး၊ ထို့ပွငျ ဒျေါအေးရှကေ ယခုသဆေုံးသူ မနနျးခမျးလှိုငျကိုလညျး လှနျခဲ့သော နှဈ(၂၀)ကြျောခနျ့က သမီးအဖွဈ ထပျမံမှေးစားခဲ့ကွောငျး၊ မနနျးခမျးလှိုငျမှာ ဒျေါအေးရှနှေငျ့အတူနထေိုငျပွီး ဆေးတိုကျ လုပျငနျးကိုလညျးကိုယျတိုငျဦးစီးလုပျကိုငျနသေူဖွဈသဖွငျ့ မှေးစားမိခငျနှငျ့အတူ အနနေီးစပျကွောငျး သို့ဖွဈ၍ အမှခှေဲမှုမြားရှိလာပါက တရားခံ၏ သား အမှအေရနညျးမညျကို စိုးရိမျမှု၊ မိမိ၏ ငှကွေေး လိုအပျမှုမြားကို အခွခေံကာ အခွားသူနှငျ့အတူ ပူးပေါငျး၍ ၎င်းငျးမှ အဓိကစီမံဦးဆောငျကွိုးကိုငျပွီး သဆေုံးသူ မိသားစုအား သတျဖွတျခဲ့ကွောငျး သိရှိရပါသညျ။
မွနျမာနိုငျငံရဲတပျဖှဲ့အနဖွေငျ့ ကနျြတရားခံအား ဆကျလကျဖမျးဆီးရမိရေး၊ ကနျြရှိသကျသခေံ ပစ်စညျးမြားထပျမံသိမျးဆညျးရရှိရေး ဆောငျရှကျလကျြရှိကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။
Credit: ရဲဇာနည် page
Posted bytrooperktr May 1, 2019 Posted inUncategorizedLeaveacomment on လေးလောင်းပြိုင်လူသတ်မှု မိပြီ
ဖုန်းဝယ်ယူသုံးစွဲသူများ အခွန်အထပ်ထပ်ဆောင်ရနိုင်သည့် ဖုန်းဝယ်လျှင် ကုန်သွယ်ခွန်တံဆိပ်ခေါင်းကပ်ရမည့် စနစ်အကြောင်း Unique မှ ဦးကျော်ဆန်းဦး ပြောပြတာလေး ကူးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်
မိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့ ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေကို ရောင်းချတဲ့အခါမှာ ကုန်သွယ်ခွန် ပြေစာတံဆိပ်ခေါင်းကပ်ရမယ်လို့ ညွှန်ကြားချက်ထွက်လာလို့ မြို့နယ်အခွန်ရုံးက ခေါ်ယူရှင်းလင်းဆွေးနွေးပါတယ်
ညွှန်ကြားချက် လိုတိုရှင်းက –
👉 ပြေစာအပေါ်ကျသင့်ငွေရဲ့ ၅% ကို စာသုံးသူထံမှ ထပ်မံကောက်ခံပါ။ ပြေစာအပေါ် တံဆိပ်ခေါင်းကပ်ပါ။ ယခင်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည့် စားသောက်ဆိုင်၊ ဟိုတယ်၊ ရုပ်သံလွှင့်လုပ်ငန်း တို့နှင့် ဥပမာပေးပါတယ်
👉 အဆင့်ဆင့် လက်ပြောင်းလက်လွှဲရောင်းချမှု (တင်သွင်းဖြန့်ချီသူမှ လက်ကားသမား၊ လက်လီကြီးသမား၊ လက်လီအရောင်းဆိုင်ငယ်) လည်း ၅% ကပ်ရမည်။ 😳😳😳
👉 မိမိတို့ခန့်မှန်းရောင်းအားအပေါ် မူတည်၍ အခွန်တံဆိပ်ခေါင်းကို ကြိုတင်ထုတ်ပေးထားမည်။ (ဒါကတော့ လုပ်ငန်းရှင် ဝန်မပိအောင် ငွေပေးချေစရာမလိုဘဲ ကြိုထုတ်ပေးထားတာပါ) 👍
👉 ထပ်မံထုတ်ယူသည့်အခါ အသုံးပြုပြီးသည့် တံဆိပ်ခေါင်းတန်ဖိုးမှ ခုနှိမ်စရာ အထောက်အထားရှိပါက ခုနှိမ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ 👍
ပထမအကြိမ် တံဆိပ်ခေါင်းကို ငွေပေးစရာမလိုပဲ ထုတ်ပေးထားမယ်။ ဥပမာ ၁၀ သိန်းဖိုး ထုတ်ပေးထားမယ်။
ဒုတိယအကြိမ် လာထုတ်ရင် ခုနှိမ်စရာရှိရင် ခုနှိမ်ပေးပြီး လိုတဲ့ပမာဏကို ငွေပေးချေရမယ်။ ဥပမာ ၁၀ သိန်းဖိုး ထုတ်ပြီး ၈ သိန်းဖိုး ခုနှိမ်စရာရှိရင် ၂ သိန်းငွေသားပေး၊ ၈ သိန်းချေဖို့ အထောက်အထားပေးရင် တံဆိပ်ခေါင်း ၁၀ သိန်းဖိုး ပြန်ထုတ်ပေးမယ်။
(ရုတ်တရက် ကြည့်ရင် အဆင်ပြေသလိုပါပဲ။ ဘယ်လိုကိစ္စမျိုးကို ခုနှိမ်ခွင့်ပေးမလဲဆိုတာ ညွှန်ကြားချက် အသေးစိတ် မထွက်သေးသည့်အတွက် မရှင်းပြသေးပါ။) 👎👎👎
⭐️⭐️⭐️ ပုံစံ ၃၁ နှင့် ခုနှိမ်ခွင့် မရနိုင်ဟုတော့ ပြောပါသည်။ 😢😢😢
👉👉👉 လက်ရှိသတ်မှတ်ထားသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းစနစ်အပေါ် သုံးသပ်ချက်
ခြုံငုံပြောရရင်တော့ အပေါ်ယံ အဆင်ပြေသယောင်ယောင်နဲ့ လက်လီရောင်းချသူနဲ့ စားသုံးသူ ပြည်သူလူထုကို ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးဖြစ်လာစေမယ့်စနစ် အခွန်နှစ်ထပ်သာမက လက်ပြောင်းလက်လွှဲအဆင့်တိုင်းမှာ ကုန်သွယ်ခွန် ၅% တိုးလာစေမယ့်စနစ်လို့ပဲ မြင်မိပါတယ်။
ခြုံပြောရရင် ကပ်ရမယ့် တံဆိပ်ခေါင်းတန်ဖိုးအတွက် နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာလေလွင့်တဲ့အပြင် ကုန်ဈေးနှုန်း ကြီးမြင့်ကာ အခွန်နှစ်ထပ်ပေးဆောင်ရမှုကို ဖြစ်စေပါတယ်။
ဘာကြောင့် ဒါမျိုးပြောရလဲဆိုတော့ –
ဦးစွာ မိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အခွန်စနစ်ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံလေး ရှင်းပြချင်ပါတယ်။
မိုဘိုင်းဖုန်းပစ္စည်းများဟာ တင်သွင်းလာစဉ်က ဆိပ်ကမ်းရောက်တန်ဖိုးအပေါ် ကုန်သွယ်ခွန် ပေးဆောင်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ မိုဘိုင်းဖုန်းများရဲ့ သတ်မှတ် လက်လီရောင်းဈေးများဟာ ကုန်သွယ်ခွန်ပါဝင်ပြီးဈေးနှုန်း (Tax Inclusive) ဖြစ်ပါတယ်။
သုံးစွဲသူ ပြည်သူလူထုကို ရောင်းချတဲ့အခါမှာ နောက်ထပ် ၅% အပြည့်အဝထပ်မံကောက်ခံရတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ရောင်းချဈေးနှင့် ဆိပ်ကမ်းရောက်တန်ဖိုး ကွာခြားချက် ထပ်တိုးတန်ဖိုး (စားရိတ်+ အခွန်+ အမြတ်) အပေါ်သာ ၅% ထပ်မံပေးဆောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။
အကောက်ခွန် ၅% ၁၀,၀၀၀
ကုန်သွယ်ခွန် ၅% ၁၀,၀၀၀
ကြိုတင် ဝင်ငွေခွန် ၂% ၄,၀၀၀
စုစုပေါင်း ၁၂% (တိတိကျကျဆိုလျှင် ၁၂% ကျော်ပါတယ်)
တင်သွင်းသူရဲ့ အရင်းငွေက ၂၂၄,၀၀၀
လက်လီရောင်းဈေး ၂၅၀,၀၀၀ ဆိုပါစို့။
အခွန်ပါပြီး လက်လီရောင်းဈေး ၂၅၀,၀၀၀ အပေါ်မှာ ကျသင့်မယ့် ကုန်သွယ်ခွန်က ၁၁,၉၀၄ ကျပ်ပါ။ (အခွန်ပါပြီးဈေးဖြစ်တဲ့အတွက် ရောင်းဈေးရဲ့ ၂၁ ပုံ ၁ ပုံပါ)
ယခင်ဆောင်ပြီးသား ကုန်သွယ်ခွန် ၁၀,၀၀၀ ကျပ်ကို ပြန်လည်ခုနှိမ်ပါက နောက်ထပ် ၁,၉၀၄ ကျပ်သာဆောင်ရမည် ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ကွာခြားချက်ကို ဖုန်းအရောင်းဆိုင်များမှ အခွန်ရှင်းလင်းရာမှာ အဆင့်ဆင့် ပေးဆောင်ကြပါတယ်။ အဆင့်ဆင့်အကြမ်းအမြတ်သည် ၁၁,၀၀၀ နှင့် ၁၅,၀၀၀ စုစုပေါင်း ၂၆,၀၀၀ ရှိသည့်အတွက် ၁,၉၀၄ ကျပ်ကို ဆောင်ပေးရတာ အဆင်ပြေပါတယ်။
💰 💰 💰 စားသုံးသူ ပြည်သူလူထု ဝယ်ယူရတဲ့ဈေးဟာ အခွန်ပါပြီးသားဈေးနှုန်း ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် ၅% ထပ်မံပေးဆောင်စရာ လုံးဝ မလိုအပ်ပါ 💰 💰 💰
သို့ပေမယ့် လက်ရှိ သိရသလောက်က
တံဆိပ်ခေါင်းထုတ်ယူချိန်မှာ ပုံစံ ၃၁ နဲ့ ခုနှိမ်ခွင့် မပေးထားဘူး။ ယခင်ဆောင်ရွက်နေကြပုံစံအတိုင်း တနှစ်စာ အခွန်ရှင်းမှ (နောင်တနှစ်ကျော်မှ) ပေးခုနှိမ်ပါမယ်။
ထို့အတွက်ကြောင့် လက်လီလုပ်ငန်းရှင်က ရောင်းရသလောက်ရဲ့ ၅% ကို တနှစ်ကျော် စိုက်ထားရမလို ဖြစ်နေတယ်။
လက်လီရောင်းချသူတွေအနေနဲ့လည်း အမြတ်အစွန်းက ၅% မရှိတဲ့အတွက် ရောင်းရငွေရဲ့ ၅% ကို တနှစ်ကျော်လောက် စိုက်ထားဖို့ဆိုတာ လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
အဲ့တော့ ဖြစ်လာနိုင်တာက စားသုံးသူအပေါ်က နောက်ထပ် ၅% ထပ်မံကောက်ခံရမလို ဖြစ်လာပါတယ်။
ကုန်ဈေးနှုန်း ကြီးမြင့်မှုဒဏ်ကို အများပြည်သူခံစားရမယ့်အပြင် အခွန်နှစ်ထပ်ပေးဆောင်ရတာမျိုး ဖြစ်လာပါတယ်။
💰💰💰ဥပမာပေးထားတဲ့ လုပ်ငန်းတွေနဲ့က သဘောသဘာဝ မတူပါဘူး။
စားသောက်ဆိုင်တွေ ဟိုတယ်တွေက ရောင်းချတဲ့ အစားအသောက်တွေရဲ့ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းအများစုဟာ ကုန်သွယ်ခွန်ပေးဆောင်ထာခြင်းမရှိပါဘူး။ ထိုအတူ နောက်ဆုံးအဆင့်စားသုံးသူကို တိုက်ရိုက်ရောင်းချခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ တဆင့်ပြန်လည်ရောင်းချမှု မရှိပါ။ ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းပါ။ ထို့အတွက်ကြောင့် ၅% ကုန်သွယ်ခွန်တံဆိပ်ခေါင်းကပ်ပြီး စားသုံးသူထံက လွယ်ကူစွာကောက်ခံလို့ရပါတယ်။
အလားတူပဲ ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်ကြည့်ရှုမှုအတွက်ပေးချေရငွေကလဲ အဆင့်ဆင့်ရောင်းချတာမျိုး မရှိသလို ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးအစား ဖြစ်တဲ့အတွက် စားသုံးသူထံက ၅% ထပ်ဆောင်းကောက်ခံရတာပါ။ ခုနှိမ်စရာ ယခင်ပေးချေပြီးသား ကုန်သွယ်ခွန်မရှိပါ။
မိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့ ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေဟာ ပြည်ပမှ တင်သွင်းရတာဖြစ်ပြီး ခုနှိမ်စရာ ကုန်သွယ်ခွန်လဲ ရှိသလို အဆင့်ဆင့် လက်ပြောင်းလက်လွှဲရောင်းချသော ကုန်စည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းမဟုတ်ပါဘူး။
တကယ်တမ်း သဘောသဘာဝတူတာက ပြည်ပကတင်သွင်းတဲ့ ဆေးလိပ်၊ အရက် တို့နဲ့ သဘောသဘာဝတူတာပါ။
👉 ဘာကြောင့် ပြေစာတံဆိပ်ခေါင်း ကပ်စေချင်တာလဲ?
လိုရင်းပြောရင် ကုန်သွယ်ခွန်ပိုမိုရရှိလိုတာပါ။ အခွန်ရှောင်တိမ်းပြီး တင်သွင်းသူတွေကြောင့် နိုင်ငံတော်က ရသင့်တဲ့အခွန် မရရှိလို့လို့ ယူဆပါတယ်။
👉 ဒါဆို လုပ်နည်းလုပ်ဟန်မှန်ရဲ့လား
ပြေစာမှာ တံဆိပ်ခေါင်းကပ်ဖို့ စိုက်ထုတ်ရမှာ အလွန်အမင်း များပြားပါတယ်။ အခွန်ရုံးကလူတွေလဲ အလုပ်ပိုများတယ်။ လက်လီလုပ်ငန်းက လူတွေလဲ အလုပ်ပိုလာမယ်။ ဌာနအနေနဲ့ ရရှိတဲ့အခွန်ကနေ တံဆိပ်ခေါင်းကုန်ကျစားရိတ်တွေ အများကြီး (အလွန်များပြားသော ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာပါ) သုံးစွဲရမယ်။ ၅၀ တန် တံဆိပ်ခေါင်းရဲ့ အရင်းဟာ တန်ဖိုးဘယ်လောက်ရှိလဲ စဉ်းစားကြည့်စေချင်ပါတယ်။
အခွန်ကို ပြန်လည်ခုနှိမ်ခွင့် ပေးမယ်ဆိုပေမယ့်လည်း လွယ်ကူရှင်းလင်းတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ် မရှိတဲ့အတွက် စားသုံးသူအပေါ်က ထပ်မံကောက်ခံရမလိုဖြစ်နေတဲ့အတွက် ပြည်သူတွေ အခွန်နှစ်ထပ် ပေးဆောင်ရတယ်။ ကုန်ဈေးနှုန်း ကြီးမြင့်လာစေပါတယ်။
ဦးစွာ ပြောချင်တာက ကုန်သွယ်ခွန် ၅% ပေးဆောင်ရမယ်ဆိုကို လက်ခံပါတယ်။ အခုပြောဆိုနေကြတယ်ဆိုတာ ဥပဒေဘောင်အတွင်းက တရားဝင်အခွန်ဆောင်ပြီး နေချင်ကြလို့ ပြောနေတာပါ။
မိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့ သဘောသဘာဝတူတဲ့ အရက်လိုမျိုး တင်သွင်းလာချိန်မှာ ကုန်ပစ္စည်းအပေါ် အခွန်တံဆိပ်ခေါင်း ကပ်ပေးတာမျိုး လုပ်လို့ ရပါတယ်။
ပြေစာပေါ်မှာမှ ကပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လဲ ပြေစာမှာကပ်ရမယ့် တံဆိပ်ခေါင်းထုတ်ယူချိန်မှာ ယခင်ဆောင်ပြီးသား ကုန်သွယ်ခွန်ကို ခုနှိမ်ဖို့ ရှင်းလင်းလွယ်ကူသော လုပ်ငန်းစဉ် ချမှတ်ပေးစေလိုပါတယ်။
သို့မဟုတ်ပါက နိုင်ငံတကာမှာ ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ထိုင်းရဲ့ VAT 7% ကောက်ခံပုံ၊ စင်္ကာပူရဲ့ GST 7% ကောက်ခံပုံတွေကို လေ့လာအတုယူစေချင်ပါတယ်။
တကယ်တမ်းဆိုရင် အလုပ်တွေအများကြီး အရှုပ်ခံစရာကို မလိုအပ်တာပါ။ တရားမဝင်ကုန်စည်တင်သွင်းသူ လက်တဆုပ်စာ လူတစုကို (၁၀ ယောက်လောက်) ထိရောက်စွာ လွယ်လွယ်ကူကူ ကိုင်တွယ်လို့ရပါလျက်နဲ့ အချိန်တွေ၊ ငွေတွေ (တံဆိပ်ခေါင်းတန်ဖိုးက ဈေးကြီးပါတယ်) အများကြီး အကုန်ခံပြီး စာသုံးသူ ပြည်သူလူထုက အခွန်နှစ်ထပ် ဆောင်ရမလို ဖြစ်နေတယ်။
၂၀၁၉ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၅ ရက်
Posted bytrooperktr April 25, 2019 April 25, 2019 Posted inUncategorizedLeaveacomment on ဖုန်းဝယ်ယူသုံးစွဲသူများ အခွန်အထပ်ထပ်ဆောင်ရနိုင်သည့် ဖုန်းဝယ်လျှင် ကုန်သွယ်ခွန်တံဆိပ်ခေါင်းကပ်ရမည့် စနစ်အကြောင်း Unique မှ ဦးကျော်ဆန်းဦး ပြောပြတာလေး ကူးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်
ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဝင်း(ငြိမ်း)အကြောင်း စစ်ထောက်လှမ်းရေး အရာရှိဟောင်း တစ်ဦး ဖွင့်ချ ———————————————————————————— ဝင်းနိုင်သောင်း
ဗိုလ်​ချုပ်​​ကျော်​ဝင်း က ဦးသန်း​ရွှေ ရဲ့ ဝှက်​ဖဲတစ်​ချပ်​လို့​ဗေဒါကဆိုပါတယ်​ ယ​နေ့ ဗို​လ်​ချုပ်​​ကျော်​ဝင်း သူရထားတယ်​​မြေ​တွေ ထိုင်​​ရောင်းပြီ ​​အေး​ချမ်းစွာ​နေထိုင်​​နေပါတယ်​….သူရခဲ့တဲ့​မြေ​တွေဟာ ဒီတစ်​သက်​စားမကုန်​ သုံးမကုန်​နှိင်​တာ ဦးသန်း​ရွှေရဲ့ ဆုလာဒ်​​ပေလား
ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဝင်း(ငြိမ်း)အကြောင်း စစ်ထောက်လှမ်းရေး အရာရှိဟောင်း တစ်ဦး ဖွင့်ချ
BurmaDemocracy, 22 April 2019
“ကျွန်တော့်ကို ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး ပြောခဲ့တာတွေက ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ညွှန့် ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးရဲ့ဧည့်ခန်းမှာ ထိုင်ရင် တဦးတည်း ညာဖက်မှာ ထိုင်တယ် ။
ဘယ်ဖက်မှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်အေး နဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရွှေမန်း အပါအဝင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေက ထိုင်တယ်။
ဘယ်ဖက်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ ပြောသမျှ ကန့်လန့် တိုက်တဲ့ သဘောမျိုး ဆက်ဆံတယ်။ ငါက ဝင်ဝင် ထိမ်းရတယ် ။ ကြာတော့ ငါလည်း ပင်ပန်းလာတယ်လို့ပြောဖူးပါတယ်။
နောက်ပြီး ငါ တိုင်း တပ်မ တွေသွားရင်လည်း တပ် တွေက မင်းတို့ထောက်လှမ်းရေး မကောင်းကြောင်းကိုဘဲ တိုင်တယ်။
နယ်ဖက် သွားရင်လည်း မင်းတို့ထောက်လှမ်းရေး မကောင်း ကြောင်းကိုဘဲ တိုင်တယ် .။
အဲဒီတော့ ငါက ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ထောက်လှမ်းရေးမှုး တွဲမယူပါနဲ့လို ပြောတယ်။ မရဖူး။”
ကျနော်က ကကလှမ်းမှာ ဂျီတူး ဗိုလ်မှုးပါ။
ဗိုလ်ချုပ်။အဆင့်ချင်း အသက်ချင်း အရမ်းကွာ
ဘယ်သူ့ကိုမှ မတိုက်ခိုက်ဘဲ စွဲစွဲမြဲမြဲရေးနေသူ
အခုချိန်မှာ ခင်ဗျားကအမှန် ကျုပ်တို့ကအမှား
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်က အမှား ခင်ဗျားကအမှန်
ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့သာမာန် တပ်ဖွဲ့ ဝင်တစ်ယောက်
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနဲ့ စကားတောင် တစ်ခါမှ မပြောဖူးသူ
ဘာတာဝန်မှမယူ ဘာမှမစီမံ ဘာမှ မဆွေးနွေးတဲ့
ဒေါ်စုနဲ dialogue လုပ်တော့ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး
ဦးတင်လှိုင်။ ဒုညွှန် ဖြစ်တဲ့ ခင်ဗျားဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဝင်း
မှာ အသံ record ယူပါတယ်။ ယူနေစဉ်မှာ ကျုပ်တို့က
dialogue မစခင်အလာပ သလာပ ပြောနေစဉ်
ခင်ဗျား ဓါတ်ပုံအကြောင်း ကျောက်မဲ လ္ဘက်ခြောက်
တကယ်ဆွေးနွေးတော့ တစ်လုံးမှ ဝင်မဆွေးနွေးတာ
မှတ်မိလား။ အဲ့လောက်ထိ ကြောက်ပြီးလည်ခဲ့တာ
လေ။ အဓိကက ကိုယ့် ကဇိပါတ်ပါမှာစိုးလို့မဟုတ်လား။
မှတ်မှတ်ရရ တစ်ရက်မှာ ဒေါ်စုကမေးပါတယ်။
ခင်ဗျားဘာမှပြန်မပြောလို့ ဒေါ်စုတင်းပြီး ဘာမှ
မဆွေးနွေး ဘာမှမပြောရင် ဒီမှာဘာလို့လာထိုင်
နေသလဲ။ ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ မပါပါနဲဆိုပြီး
ပြောတာတောင် အရှက်မရှိ ရယ်ကျဲကျဲနေခဲ့တာ
မှတ်မိလားဗျ။ ဒီလောက်တာဝန်မယူ တာဝန်မခံ
ကျုပ်တို့တောင် လူပိုကြီးဆိုပြီး အတော် အထင်သေးခဲ့တာတော့ဒီချိန်မှာဝန်ခံပါရစေ။ လက်ရှိ ဒေါ်စုအာဏာရှိချိန် အမှတ်တရ မိသားစု ဆွမ်းကျွေးတွေမှာ သူနဲ့
မနှိပ်ကွပ်ခဲ့ဘဲ လူသားဆန်ခဲ့ ကလိန်ကကျစ်
မကျခဲ့လို့ဘဲ ဆိုတာ စိတ်ပညာနဲ့ဘွဲ့ရခဲ့တဲ့
၀၇ ၀၂ ၂၀၁၉။
တချို့ကလည်း ကြားကဝင် ငြှောင့်မဲ့သူတွေ
ပြောရရင် ရေးရတာ တန်ကို မတန်ဘူးလို့ထင်ထား
ဒါပေမဲ့ ထိုက်သင့်သလောက် သူ့အကြောင်းမရေးရင်
မသိတဲ့သူတွေက ဝေဝါးဝါးနဲ့ အမှားကို အမှန်ထင်
ဥယာဉ်မှုးထဲက ကျော်ဟိန်းလိုပေါ့။ ဟိုဟာက ရုပ်ရှင် ဇာတ်လမ်းထဲမှာမင်းသား နောက်ပိုင်းမှာဇာတ်ကို
နောက်တစ်ချက်က လူကြီးတွေကို ထပ်သွေးခွဲပေးတာ
လို့မြင်တယ်။ မြန်မာတွေဟာ ခွင့်လွှတ်တတ်တဲ့စိတ် အခြေခံရှိတယ်။ ပြန်တည့်သွားရင်သူချွန်တွန်းခဲ့တာ
တွေ သူ့လုပ်ရပ်တွေပေါ်သွားပြီး သူဒုက္ခရောက်မှာ
ပြီးတော့ သေချာဖတ်ကြည့်ရင် ငါနဲ့မဆိုင်ဘူး။
လူကြီးတွေကြားမှာ သူဖာသာ သဟဇာတ
ဖြစ်အောင်မနေတာ သူကစ ကန့်လန့်တိုက်တာ
တာဝန်အရှိဆုံးသူက ကြီးလေးတဲ့ နိုင်ငံ့တာဝန်
ကိုယ်တိုင်က အသုံးချ ကိုယ်တိုင်စည်းကမ်း
ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျနော်ကလည်း ပိုမှန်သွားအောင်
ဒေါ်စုက ထပ်မေးတယ်။ နားထောင်ရုံ
ကျနော်က ပန်းချီဆွဲတယ် ဓါတ်ပုံရိုက်တယ်
တင်းနစ်ရိုက်တယ် အားရင် ဂေါက်ရိုက်တယ်ဆိုတော့
ဒေါ်စုက တိုင်းပြည်တွက်နစ်နာတာပေါ့။ဒီလောက်ရာထူးကြီးကြီး တပ်မတော်မှာပေးထားတာဆိုတော့
၀၈ ၀၃ ၂၀၁၉။
(U) Win Naing Thaung’s Facebook မှကူးယူဖော်ပြပါသည်
Posted bytrooperktr April 25, 2019 Posted inUncategorizedLeaveacomment on ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဝင်း(ငြိမ်း)အကြောင်း စစ်ထောက်လှမ်းရေး အရာရှိဟောင်း တစ်ဦး ဖွင့်ချ ———————————————————————————— ဝင်းနိုင်သောင်း
ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက ရန်ကုန်မြို့ ဓါတ်ပုံလေးတွေ သိမ်းဆည်းထားလို့ရအောင် စုစည်း တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်
Posted bytrooperktr April 24, 2019 Posted inUncategorizedLeaveacomment on ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက ရန်ကုန်မြို့ ဓါတ်ပုံလေးတွေ သိမ်းဆည်းထားလို့ရအောင် စုစည်း တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်
(၁) ပျားရည်လက်ဖက်စားဇွန်း(၁) ဇွန်း
ပြီးပြည့်စုံသောအလှတရားအတွက်FACE ART…. 😍
Posted byhlakhin April 20, 2019 Posted inUncategorizedLeaveacomment on အသားအရည်စိုပြေဖို့အတွက်
Deep Red colour အနီရင့်ရောင်ရှိဒေသတွေက အမျိုးတို့ရေ အပူဒဏ်ပြင်းပါသဖြင့် အရိပ်ထဲမှာပဲ နေကြရန် နှင့် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားသော ရှေးဦးသူနာပြုနည်းလေး မျှဝေလိုက်ပါတယ်
Deep Red colour အနီရင့်ရောင်ရှိဒေသတွေက အမျိုးတို့ရေ အပူဒဏ်ပြင်းပါသဖြင့် အရိပ်ထဲမှာ နေသင့်ပါတယ် ကျမ်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ အပူဒဏ်ကြောင့် သတိလစ်ခြင်းအား အရေးပေါ်ရှေးဦးပြုစုနည်းလေးပါ မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
Posted bytrooperktr April 20, 2019 April 20, 2019 Posted inUncategorizedLeaveacomment on Deep Red colour အနီရင့်ရောင်ရှိဒေသတွေက အမျိုးတို့ရေ အပူဒဏ်ပြင်းပါသဖြင့် အရိပ်ထဲမှာပဲ နေကြရန် နှင့် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားသော ရှေးဦးသူနာပြုနည်းလေး မျှဝေလိုက်ပါတယ်
မွန်ပြည်နယ် စစစ ညွှန်မှူးအိမ်မှ ခိုးယူသွားသောပစ္စည်းများ ပြန်လည်ရရှိသော်လည်း တရားခံထွက်ပြေးနေ
ဧပြီလ ၁၈ ရက်နေ့ည မွန်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ မော်လမြိုင်မြို့ မုပွန်ရပ်ကွက် အိုးရုံရပ်နေ ရဲမင်းပိုင် အသက် ၂၄ နှစ် ဆိုသူ၏ နေအိမ်တွင်း ၀င်ရောက်ရှာဖွေဖမ်းစီးစဉ် တရားခံက ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပြီး ခိုးယူဖေါက်ထွင်းထားသော ရွှေထည်ပစ္စည်းများနှင့် ငွေစက္ကူများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိသိမ်းစည်းရမိထားကြောင်းသိရသည်။
credit: hintha media
Posted bytrooperktr April 19, 2019 April 19, 2019 Posted inUncategorizedLeaveacomment on မွန်ပြည်နယ် စစစ ညွှန်မှူးအိမ်မှ ခိုးယူသွားသောပစ္စည်းများ ပြန်လည်ရရှိသော်လည်း တရားခံထွက်ပြေးနေ